Antsoina ho misionera ny mambra rehetra
"Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain 'Andriamanitra ho an 'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran'llay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." —1 Pet. 2:9.
Manafy hery ny malemy indrindra ny Fanahy Masina, izay solon-tenan'i Kristy mba hitondra azy ireo amin'ny fandresena. Namolavola fitaovana Andriamanitra mba hitaona ny olona hanatona Azy. Maniraka olona maro izay tsy voahosotry ny fametrahan-tanana Izy hanao ny asany. Mamaly ireo fanakianana izay misy mikasika izany fomba fiasa izany izy, ary mialoha ny hitrangan'izany mihitsy aza. Mahita ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra. Mahalala sy mahafantatra mialoha ny faniriana rehetra Izy ary manome vahaolana amin'ny olana rehetra. Raha tsy mibahana ny lalana ny olombelona voafetra izay nanankinany ny asany, dia haniraka mpiara-miasa amin'ny tanim-boalobony Izy.
Hoy Izy amin'ireo fanahy niova fo rehetra: "Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra" - Mar. 16:15. Tsy ilaina ny hipetrahan'Andriamanitra mialoha eo amin'ny filan-kevitra mpanao lalana ety an-tany ary mangataka amin'ireo izay mihevitra fa izy ireo ihany no tsy maintsy mamolavola drafitra ho an'ny asany, hiangavy hoe "Mamela ireo olona nofidiko ve ianareo hiray lalana aminareo hiala amin'izaroa faritra ao amin'ny tanim-boaloboko ara-panahy izaroa?" Nijoro tsy lavitry ny seza fiandrianany any an-danitra i Kristy raha naniraka ny mpianany ary nandray ireo rehetra mino ny anarany ho misionera.
Irin'i Jesôsy raha ny mpanompo tsirairay avy izay nanankinany fahamarinana masina no hahatsiaro ny baikony, hihevitra ny fidadasiky ny asany ary hametraka ny adidy hitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao amin' ireo olona maro voakasik' izany. "Ary hoy Izy taminy: "izany no voasoratra, fa i Kritsy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; ary mba hotorina amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema" - Lio. 24:46,47. Nomba ireo izay nitory ny filazantsara ny herin'Andriamanitra. Raha ireo izay nilaza ny tenany fa manana fanandramana velona amin'ny zava-panahy no nanatontosa an-tsakany sy an-davany ny adidy nankinin'Andriamanitra taminy, dia ho nahazo fampitandremana izao tontolo izao, ary ho tonga tamin-kery sy voninahitra lehibe tety an-tany i Jesôsy Tompo. - HoM, 1 Aogositra 1896.